Ngabe imisebe izuza ngofuzo? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Ngabe imisebe izuza ngofuzo?
Umnyombo wakho ray ayizuzwa njengefa kubazali bakho. Abazali bazama ukufundisa izingane zabo futhi baziqondise kulokho abakholelwa ukuthi kuzozenza zijabule. Ngeshwa, izingane zinethuba elihle lokuthi zivela emisebeni ehlukile kunomzali ngakho-ke zinezidingo ezihlukile zenjabulo.
Kungenzeka uzuze ifa lezinkinga ezivela kubazali bakho uma banezinkinga ezingaxazululiwe ngesikhathi sokushona kwabo. I-ray equkethe lokho kukhishwa kufanele isetshenziswe njengoba izungeze i-ray yakho eyinhloko.
Isibonelo, uBill unenkinga lapho ezwa khona isidingo sokuba njalo abe ngumondli womndeni wakhe. Inkinga ivela ku-ray eluhlaza okwesibhakabhaka. Lapho edlula emhlabeni ngokungazelelwe engaluxazululanga lolu daba, indodakazi yakhe uCandace uzithola esesimweni esiguqula impilo. Ingqikithi yakhe iluhlaza futhi unephupho lokuba ngumculi. Ngokudlula emhlabeni kukababa wakhe, uzizwa enesidingo sokuqala ukusebenza ehhovisi ngoba ezwa ukuthi udinga ukuba ngumondli womndeni wakhe. UCandace manje sekufanele ayinqobe leyo nkinga (i-blue ray) bese ebuyela ekulandeleni amaphupho akhe (i-green ray) ukuze ajabule ngempela.
Wonke umuntu ulapha ukuze aphile impilo ezimele futhi kunezindlela ezehlukene zenjabulo.
Amehlo ami manje asengawakho
kanye nenhliziyo yami
umphefumulo omncane nomsulwa
ubuciko bami obuyinhloko
womhlaba wami a la carte
bese ngikufundisa ikhambi lami
imibono eyabiwe yehlukene
Impilo entsha ongayihlola
ubusha buqala kabusha
kwesokunxele ukuze bonke bakhuleke
njengoba imisebe yami izosuka
Amathegiukuqonda ngezakhi zofuzo kuzuzwe njengefa ukukhula komuntu siqu izinkondlo imisebe ingokomoya
Ingabe ikhona indlela elula yokuthola umnyombo wami uRay?
Ngikuqonda kanjani ukujabula kwabantu abehlukene?
Imisebe ehlukene ibuthinta kanjani ubuntu?